Romelu Lukaku Oo Shaqada Wakiilada Qabanaya, Chelsea Oo Uu Ka Inkaarsanayo & SADDEX Xiddig Oo Uu Lacag La'aan Inter Milan Ku Keeni Karo - Gool24.Net
Romelu Lukaku Oo Shaqada Wakiilada Qabanaya, Chelsea Oo Uu Ka Inkaarsanayo & SADDEX Xiddig Oo Uu Lacag La’aan Inter Milan Ku Keeni Karo
16/05/2020 Apdihakem Omer Adem
Weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Romelu Lukaku ayaa qayb ka qaadanaya qorshaha kooxdiisa lagu dhisayo suuqa xagaagan isaga oo sabab u noqonaya in saddex ciyaartoy oo ay kasoo wada jeedaan Belgium ay soo gaadhaan San Siro.
Saddexdaas xiddig ayaa lagu kala sheegay weeraryahanka Inter Milan ee Dries Mertens, daafaca dhexe ee Tottenham ee Jan Vertonghen iyo waliba daafaca midig ee Paris Saint-Germain ee Thomas Meunier.
Dhawr il wareed oo kala duwan oo ka faalooda kubadda cagta ayaa sheegayay in Dries Mertens uu qarka u saaran yahay inuu heshiis la gaadho kooxda uu hoggaaminayo tababare Antonio Conte.
Lukaku ayaa noqon kara mid kamida sababaha Mertens kusoo jiida San Siro, waxa xusid mudan in 32 sano jirka Napoli si xoogan loola xidhiidhinayay Chelsea tan iyo bishii January iyadoo ay xataa jireen warar sheegaya in tababare Frank Lampard uu shaqsiyan ula xidhiidhay.
Sida laga helayo wargeyska Talyaaniga ah ee La Gazzetta dello Sport oo ah midka xogtan banaanka keenay, Lukaku ayaa awoodiisa oo dhan iskugu geyn doona sidii uu Inter ku keeni lahaa asxaabtiisan oo dhammaantood kooxo cusub raadinaya.
Arrinta xiisaha leh ee sida weyn loogu amaani doono Inter iyo Lukaku haddii heshiisyadani ay suurogalaan ayaa ah in dhammaan saddexda xiddig qaab bilaash ah lagu helayo xagaaga sababtoo ah in qandaraasyadoodu ay dhacayaan.
Ugu dambayn, Nerazurri ayaa sidoo kale la sheegayaa inay fursad kale siin karto khadkeeda dhexe ee Radja Nianggolan oo qaab amaah ah xilli ciyaareedkan ku jooga kooxda Cagliari.